‘एमालेमा अब विवाद र अन्तरविरोधको सन्देश दिनुहुँदैन’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — एमालेको दसौं महाधिवेशनको संघारमा छ । तर विगतमा जस्तो अहिले नेतृत्वका लागि नेताहरू खुलेर बाहिर आउन सकेका छैनन् । पार्टीभित्रका विभिन्‍न मनोविज्ञानहरूको व्यवस्थापन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै गरिदिने आशामा धेरै नेताहरू अहिले धेरै नेताहरू उनको मुख ताकिरहेका छन् ।
कथं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा नै भए के गर्ने भन्ने छटपटी पनि नेताहरूमा छ । महाधिवेशनको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर एमाले सचिव गोकर्ण विष्टसँग कान्तिपुरका मणि दाहाल र बबिता शर्माले गरेको कुराकानी :
महाधिवेशन आउन ४ दिन बाँकी छ । भित्रभित्र आकांक्षी भएपनि सार्वजनिक रुपमा कसैले दाबी गरेका छैनन् । किन यस्तो सन्नटाको आवस्था आयो ?
हाम्रो आन्दोलनमा धेरै उतारचढाव पार गरेका छौं, कहिलेकाहीँ अनावश्यक क्षति पनि व्योहोरेका छौं, पार्टीको समग्र पंक्तिले लिएको शिक्षा भनेको पार्टीलाई गुट, प्यानलरहित एकमना एकताका साथ अगाडि लाने र आजका चुनौती सामना गर्ने सबल, सशक्त र एकीकृत पार्टी निर्माण गर्ने चाहना छ । त्यो चाहनाको कारण पनि विगतमा जस्ता तरंगहरू अहिले देखा परेका छैनन् ।
प्यानल नबने पनि व्यक्तिगत रुपमा लड्नेहरूको जुन तरिकाले नेतृत्वमा दाबी हुन्थ्यो, त्यो पनि भएको देखिंदैन । के कारणले गर्दा रोकिनु भयो ?
व्यक्तिले आफूलाई केन्द्र भागमा राखेर उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तथा विभिन्न प्यानल बनाउने खालका अभ्यास विगतमा भए । एमालेभित्र जुन प्रकारका समस्या देखा परे, ती समस्यालाई भित्रै हल गरेर पार्टीलाई थप सशक्त बनाउनु पर्दथ्यो, त्यो गर्न सकेनौं र केही क्षति व्यहोर्‍यौं । आजको सन्दर्भमा यस्ता कुराहरूबाट हामीले पाठ लिनुपर्छ । त्यसकारण दसौं महाधिवेशन वैचारिक, सैद्धान्तिक र संगठनात्मक एकताको अनुपम उदाहरण पेस गर्ने मान्यताका आधारमा सबैले एउटा मर्यादा र संयमता अपनाएको अवस्था हो ।
तपाईँहरु शक्ति कमजोर भएर यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो ?
त्यो पनि होइन । अहिले नेकपा एमालेका विरुद्ध चौतर्फी हमला छ । सबै शक्तिहरू एमालेविरुद्ध गठबन्धन गरिरहेका छन् र पार्टीलाई एक्ल्याउने कोशिस गरिरहेका छन् । एमाले विरोधी गठबन्धनलाई सामना गर्न र जनताकोबीचमा पहिलो शक्तिको रुपमा स्थापित गर्न हामीले धैर्यता, संयमता अपनाउनु पर्छ, मर्यादाको सीमाभित्र रहनुपर्छ । आम कार्यकर्ताको चाहना र भावना पनि कतिपय अन्तरविरोधलाई पार्टीभित्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने छ । यो भावनालाई सम्मान गर्न नै यस्तो स्थिति बनेको हो ।
नेतृत्वलाई चिढ्याउँदा आफ्नो पद के हुने हो भन्ने डरले पनि तपाईँहरू बोल्नु भएको छैन भन्ने कुरा पनि छ नि ?
यतिबेला पार्टीको विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । विधान महाधिवेशनले पार्टीका सबै दस्तावेजलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यसले त्यहि कुरालाई पुष्टि गरेको छ कि अहिले एमालेभित्र कुनै प्रकारको प्यानल छैन, समूहगत अन्तरविरोधहरू छैनन् ।
जीवन्त पार्टीभित्र विभिन्न मुद्दाहरूका विषयमा आउने भावना, विश्लेषण, मनोविज्ञानलाई प्रतिबिम्ब गर्ने कुरा छ, त्यो बैठकभित्र हरेक कसैले व्यक्त गर्न सक्छन् । मुख्य कुरा विगतमा प्यानलगत अभ्यास हुने गर्दथ्यो, त्यसले मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि पार्दथ्यो । तर आज पार्टीभित्र त्यो प्रकारको अभ्यास छैन । जति भावना व्यक्त हुन्छन्, ती पार्टीको बैठक भित्रै छलफल हुन्छन्, छलफलपछि सामुहिक र संस्थागत निष्कर्षका आधारमा पार्टी अगाडि बढ्छ ।
अबको नेतृत्व चयन सर्वसम्मत कि प्रतिस्पर्धा हुन्छ ?
यी सबै कुराहरू महाधिवेशनले नै टुंगो लगाउने हो । आजको आवश्यकता र मेरो अनुमान पार्टीको मुख्य नेतृत्व लगायत कम्तीमा पदाधिकारी सर्वसम्मतिले नै टुंगो लाग्ला भन्ने छ । धेरैको अपेक्षा पनि यहि हो । आजको विषम परिस्थितिमा सर्वसम्मत र सहमतिका साथ नेतृत्व चयन हुनुपर्दछ । नेतृत्व निर्माणमा कुनै प्रकारको किचलो, अस्वस्थता पैदा हुने वातावरण बन्नु हुँदैन ।
दस बुँदे सहमति मार्फत् एमालेमा रहने निर्णय गर्नुभएका दस नेता मध्येका एक भीम रावलले अध्यक्षमा उमेद्वारी घोषणा गर्नुभयो । तपाईहरूबीच सल्लाहमा उहाँले उमेद्वारी घोषणा गर्नु भएको हो ?
यो विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन । अब हामी पछाडि फर्कन हुँदैन । आजको सन्दर्भ र आवश्यकतामा आधारित भएर एमालेलाई नयाँ उचाइमा लाने गरी त्यसतर्फ उन्मुख हुन जरुरी छ । हामी विगतमा फर्कने, पछाडिका कुराहरूलाई टेकेर पार्टीभित्र फेरि पनि अस्वस्थता र अन्तरविरोध पैदा गर्नेगरी जानु हुँदैन । अहिले पार्टीको मुख्य नेतृत्व लगायत अन्य पदाधिकारीमा सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन हुनुपर्दछ ।
अहिले एमालेभित्र विवाद, अन्तरविरोध छ भन्ने सन्देश बाहिर जाने गरी कहिँ कतैबाट त्यो प्रकारको प्रयत्न गर्नु उपयुक्त हुँदैन । कुनै पनि हिसाबले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ । एकताबद्ध एमालेले नै अहिलेको संकटको समाधान र आवश्यकताको सम्बोधन गर्न सक्छ ।
भीम रावलले सार्वजनिक गरेपनि पदाधिकारीका आकांक्षी धेरै देखिनुहुन्छ । त्यो संख्या हेर्दा हाल कायम पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गर्न कठिन देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी होला त सर्वसम्मति ?
सतहमा हेर्दा जुन प्रकारको आवश्यकता देखिन्छ, यसलाई सम्बोधन गर्ने गर्न पदाधिकारीको संख्या अलि अपुग हो कि भन्ने देखिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटीका कमरेडहरूले राष्ट्रिय महाधिवेशनले एक दुई पदहरू थपेर व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ भनेर सुझाव पनि दिनुभएको देखिन्छ/सुनिन्छ । विधान महाधिवेशनले पारित गरेको कुरालाई राष्ट्रिय महाधिवेशनले परिमार्जन गर्न सक्छ । यद्यपी त्यसको गुञ्जायस अहिले पनि छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले यदि आवश्यकता महसुस भयो भने त्यो ठाउँ अहिले पनि बाँकी छ ।
तपाईँ दाबी कुन पदमा हो ?
अरु धेरै साथीहरूले दाबी सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छैन, यस्तो सन्दर्भमा म आफूले पनि यो पदमा दाबी भनेर प्रस्तुत गर्न चाहन्न । तर कतिपय साथीहरू मलाई साविकभन्दा माथिल्लो पदको जिम्मेवारी लिन जरुरी छ, त्यो हिसाबले सोच बनाउनु पर्छ भनेर सुझाव दिनेको संख्या पर्याप्त छ । फेरि पनि महाधिवेशनको दिन नजिकिँदै छ । अन्तिममा कसरी जाने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ला ।
अध्यक्षमा सर्वसम्मति कि चुनावको सम्भावना देख्नु भएको छ ?
पार्टी अध्यक्षसहित प्रमुख पदमा सहमतिका आधारमा नेतृत्व निर्माण गर्नु नै एमालेको भविष्यका लागि उपयुक्त हुन्छ । एमाले जुन ढंगले घेराबन्दीमा पर्दैछ वा पार्ने कोसिस गरिएको छ, त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न सक्दछ । यसकारण पार्टी अध्यक्षसहित महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सहमतिका आधारमा व्यवस्थापन गर्नु नै हाम्रो पार्टी र आन्दोलनका लागि सुखद् हुन्छ ।
तस्बिरहरूः अंगद ढकाल ।
प्रकाशित : मंसिर ६, २०७८ १९:५५
कारागारभित्र गिरीको दादागिरी : समर्थन र विरोधमा नाराबाजी
मंसिर ६, २०७८ विनोद भण्डारी
विराटनगर — अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका विराटनगरका अभिषेक गिरीका नाममा मोरङ कारागार अशान्त हुने क्रम रोकिएको छैन ।
पहिले गिरीलाई मोरङ ल्याउनु हुँदैन भन्दै कैदीबन्दीले नारावाजी गरे । आइतबारदेखि उनैलाई ल्याउनुपर्छ भन्दै केही कैदीबन्दी र आफन्तले दुइ दिनदेखि नारबाजी गर्दा कारागार थप अशान्त बनेको छ ।
आइतबारदेखि गिरी पक्षका आफन्तले नराबाजी गर्दा कारागार प्रशासनले मुलगेट बन्द गरिदिएपछि गिरीलाई मोरङ कारागार ल्याउनुपर्छ भन्नेहरू बाहिरै बसेर नाराबाजी गरिरहेका छन् ।
उता गिरीलाई मोरङ ल्याउन कुनै आधिकारीक जानकारी नआएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । डिल्लीबजार कारागारमा रहँदा गिरीलाई विभागले भदौ १७ गते मोरङ पठाउने निर्णय गरेको थियो । कारागार विभागले उनलाई एक महिना पहिला मोरङ ल्याएको थियो । तर कारागारका कैदीबन्दीले आन्दोलन गरेपछि स्थानीय प्रशासनले भित्र प्रवेश गराउन नसकेपछि गिरीलाई सप्तरी कारागार पठाइएको थियो । उनलाई पछिल्लो पटक सप्तरीबाट मोरङ ल्याउने कारागार विभागको निर्णय बाहिरिएलगत्तै मोरङ कारागार दुइ दिनदेखि अशान्त बन्दैआएको छ ।
कारागारका निमित्त प्रमुख रामप्रसाद पोखरेलका अनुसार गिरीलाई कहिले ल्याउन हुन्न र कहिले ल्याउनुपर्छ भन्ने नाममा कारागार भित्र र बाहिर आन्दोलन हुँदा आसपासको वातावरण अशान्त हुँदैगएको हो । उनले भने, 'गिरीलाई सप्तरीबाट मोरङ ल्याउनुपर्छ भन्ने आधिकारिक जानकारी आएको छैन । तै पनि उनकै नाममा मोरङ कारागार थप अशान्त बन्दैआएको छ ।'
गिरीलाई दुइ महिना अगाडि मोरङ सरुवा गरेको कारागार व्यवस्थापन विभागको निर्णय बाहिर आउनासाथ कारागारका कैदीबन्दी आन्दोलनमा उत्रिए । विराटनगरको देवकोटा चोकका गिरी यसअघि मोरङमै रहँदा कारागारका चौकीदार थिए । त्यसबेला उनले कैदीबन्दीलाई यातना दिएको र भित्रबाटै असुली र फिरौती धन्दा चलाएको भन्दै कारागार विभागले २०७४ चैतमा डिल्लीबजार कारागार सरुवा गरेको थियो ।
कांग्रेस निकट भनी चिनिएका गिरी शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै गुहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पहलमा उनलाई मोरङ पठाएको स्रोतको दावी छ । उनलाई कारागारका चौकीदार बनाउने प्रशासनको तयारी थियो । गिरीलाई मोरङ ल्याउने तयारीका लागि कारागार प्रशासनले त्यसबेलाका चौकीदार गिरी विरोधी नवीन राईलाई झुम्का कारागार सुरुवा गरिएको थियो । तर विभागको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुँदा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका दोषी किरण गुरुङलाई चौकीदार बनाइएको थियो ।
गुरुङ चौकीदार भएपछि गिरीलाई मोरङ ल्याइयो । तर त्यसको विरोधमा कैदीबन्दी आन्दोलनमा उत्रिए । गिरीलाई कारागार प्रशासनले भित्र छिराउनै नसकेपछि उनलाई सप्तरी कारागार पठायो । गिरीलाई झुम्का र झापा कारागारले लिन नमानेपछि सप्तरी पठाइएको स्रोतको भनाइ छ ।
गिरीलाई सप्तरी पठाएपछि मोरङ कारागारमा गिरी पक्ष र विपक्षीका कैदीबन्दीबीच अघिल्लो मंगलबार दोहोरो झडप भयो । झडपमा चौकीदार गुरुङसहित ६ जना घाइते भए । झडपपछि कारागार प्रशासनले गुरुङसहित १४ कैदीबन्दीलाई झुम्का र झापा कारागारमा सरुवा गरेर कर्तब्य ज्यान मुद्दाकै कैदी कात्तिक कामतलाई प्रशासनले चौकीदार नियुक्त गर्‍यो।
यसरी मोरङ कारागार गिरीका नाममा एक महिनादेखि अशान्त रहेको निमित्त जेलर रामप्रसाद पोखरेलको भनाइ छ । बाहिर झैँ कारागार भित्र पनि राजनीति छिरेको पोखरेल बताउँछन्। पोखरेलले भने कैदीबन्दी पनि दलगत गुटका नाममा उफ्रिन थालेका छन । गुरुङसहित १४ जनालाई सरुवा गरेपछि अहिले कारागारमा केही शान्ति छाएको पोखरेलको भनाइ छ । हाल मोरङ कारागारमा ७२ महिलासहित एक हजार कैदीबन्दी छन् ।
को हुन् गिरी ?
युवती प्रयोग गरी सरकारी कर्मचारीलाई बन्धक बनाएर फिरौती मागेको आरोपमा गिरीलाई प्रहरीले २०७० सालमा पक्राउ गरेको थियो । यसअघि उनी विराटनगर जतुवाका करण यादवको हत्यामा पक्राउ परेर २०६९ सालमा उनले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सफाइ पाएर जेलमुक्त भएका थिए । त्यसबेला गिरीका सहकर्मी पर्शुराम बस्नेत थिए । बस्नेत हाल एमाले मोरङका प्रभावशाली युवा नेता हुन् ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका लेखा सहायक अच्युतप्रसाद रेग्मीलाई बन्धक बनाएर रकम मागेको आरोपमा गिरीसहित चारजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । गिरीले आफ्नी प्रेमिकालाई प्रयोग गरेर रेग्मीलाई सानेपास्थित आफ्नो डेरामा बन्धक बनाएर १० लाख रुपैयाँ फिरौती मागेका थिए । यही प्रकरणमा गिरी अहिले जेलमा छन् । गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि गिरीमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ ।
चौकीदार बन्न मरिहत्ते
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार कारागारमा कानुनी रुपमै चौकीदार चयन हुने गरेको छ । चौकीदारसहित नाइके र भाइ नाइकेको पनि व्यवस्थ हुन्छ ।
कैदीबन्दीको व्यवस्थापन, औषधि उपचार, खाद्यान्न आपूर्ति लगायतमा चौकीदारको प्रमुख भूमिका हुन्छ । उसले जेलभित्र पसल चलाउने, मेस चलाउने, खाद्यान्न आपूर्ति गराउने जिम्मा पाउँछ । मोरङ कारागारको चौकीदार हुनेले लाखौं आम्दानी गर्दैआएका छन् । त्यसका लागि चौकीदार बन्न जेलभित्रका कैदी बन्दीको तँछाड मछाड नै हुने बताइन्छ ।
त्यति मात्र नभएर चौकीदार दिनभर बाहिर स्वतन्त्र रुपमा हिँडडुल गर्नसमेत पाउँछन् । साँझसम्ममा कारागार प्रवेश गरिसक्नुपर्ने गरी दिनभर जहाँ पनि हिँड्न मिल्ने र आफ्नो गृहनगरमा अरू धन्दा चलाउन पाइने भएकाले पनि गिरी मोरङ कारागार आउन खोजेको बुझिन्छ ।
यसअघि गिरी मोरङ कारागारको चौकीदार रहँदा दिनभर हिँडडुल गरी ठेक्कापट्टा चलाउनेदेखि कारागारभित्र कैदीबन्दीलाई यातना दिने, फिरौती र असुली धन्दामा सञ्चालन गरेको पुष्टि भएपछि उनलाई २०७४ चैतमा डिल्लीबजार कारागार सरुवा गरिएको थियो ।
प्रकाशित : मंसिर ६, २०७८ १९:५१
सबैलाई समेट्न खोज्दा विधान अक्षरश: पालना भएन
'बाँचुञ्जेलसम्म पद हडपिरहने संस्कारले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन'
'पार्टीभित्रको परम्परागत र दासी प्रथाविरुद्ध मेरो उम्मेदवारी'